Real Madrid oo Wali Sii Wado Guulaheeda iyo Ronaldo oo Rikoor Cusub Dhigay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Real Madrid oo Wali Sii Wado Guulaheeda iyo Ronaldo oo Rikoor Cusub Dhigay “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid Santiago Bernabeu 3-0 uga badisay kooxda Celta Vigo.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa qeybtii hore ee ciyaarta goolka koowaad oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta labada gool ee kale u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa caawo dhaliyay hat-trick-gii 23-aad oo uu dhaliyo horyaalka Spain ee La Liga.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa jabiyay rikoorkii ahaa 22 hat trick oo horyaalka Spain ay ka dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Alfredo Di Stefano oo u ciyaari jiray Real Madrid iyo Telmo Zarra oo u ciyaari jiray kooxda Athletic Bilbao.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa 23-gool ku hogaaminayo gool dhalinta horyaalka Spain ee La Liga,waxana uu ku dhaliyay 14-kulan.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii 200-aad ee horyaalka Spain,isagoo ku dhaliyay 178-kulan.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa kualnkii 17-aad oo isku xiga gool ku dhaliyay garoonka kooxda Real Madrid ee Santiago Bernabeu.
Kooxda Real Madrid ayaa sidoo kale la sinmatay rikoorkii ay kooxda Barcelona dhigtay sanadkii 2005-06 oo ahaa in ay 18-kulan oo isku xiga ay badisay horyaalka Spain ee La Liga,waxana xiligaasi kooxda Barcelona tababare u ahaa macalin Frank Rijkaard.
Kooxda Real Madrid ayaa horyaalka Spain ee Liga ku hogaamineyso 36-dhibcood,halka kooxda Celta Vigo ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Dhanka kale kooxda Atletico Madrid ayaa 2-0 uga badisay kooxda Elche.
Kooxda Atletico Madrid ayaa waxaa labadii qeyb ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Jose Gimenez iyo Mario Mandzukic.
Kooxda Atletico Madrid ayaa horyaalka Spain ee La Liga uga jirto kaalinta labaad,waxana ay leedahay 32-dhibcood,halka kooxda Elche ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Manchester City oo u Soo Dhawaatay Kooxda Chelsea “SAWIRRO”
Bayern Munich oo Ka Badisay Kooxda Bayer Leverkusen